Heshiiska Hazard ee kooxda Real Madrid oo farxad galiyay Klopp iyo kooxda Liverpool – Gool FM
(England) 08 Juunyo 2019. Wargeyska “Liverpool Echo” ayaa laabta ugu qaboojiyay taageerayaasha Reds go’aanka kaga aadan maamulka kooxda joogista xiddigooda reer Senegal Sadio Mané ee garoonka Anfield inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Wargeyska ayaa sheegay in Liverpool ay si weyn u dooneyso inay ilaashato xiddiga kooxdeeda ee Sadio Mané, kaddib markii uu dhawaan saxiixaay heshiis cusub, isla markaana ay Real Madrid kaloo saxiixatay Eden Hazard kooxda Chelsea.
Sadio Mané ayaa lala xiriirinayay ku biirista kooxda Real Madrid, kaddib markii uu codsaday macalinka reer France ee Zinedine Zidane, balse waxay arintan ahayd kahor inta aysan Los Blancos dhameystirin heshiiska Hazard, oo boos isku mid ah ay ka wada ciyaaraan xiddiga reer Senegal, taasoo cadaadiska ka yareeneysa Klopp iyo kooxda Liverpool.
Wargeyska “Liverpool Echo” ayaa hadalkiisa intaas ku sii daray marka laga soo tago in Eden Hazard uu ku biiray kooxda Real Madrid, in Sadio Mané uusan waligiis muujinin rabitaan ku aadan inuu ka tago Liverpool, xitaa kaddib markii magaciisa lala xiriiriyay u dhaqaaqista garoonka Santiago Bernabeu.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dhammaystirtay heshiiska Eden Hazard, kaasoo ay lacag rikoorka kooxda ah ee gaarsiisan 100 milyan euro kaga soo qaadatay naadiga reer England ee Chelsea.
Thibaut Courtois oo fariin u diray Eden Hazard kaddib imaatinkiisa kooxda Real Madrid